Dia nankany Vladivostok | Vaovao momba ny dia
Vladivostok Tanàna rosiana izay akaikin'ny sisintany miaraka amin'i China sy Korea Avaratra izy io. A tanàna seranan-tsambo any amin'ny 9300 kilometatra monja miala an'i Moskoa no seranan-tsambo lehibe indrindra any amin'ny morontsirak'i Pasifika. Araka izany, tranonkala iray manan-danja amin'ny varotra an-dranomasina izy io.
Ny fotoana voalohany nandrenesako ny momba an'i Vladivostok dia tany am-pianarana, tao amin'ny kilasin'ny Jeografia, rehefa nahalala ny momba ny lalamby Trans-Siberian angano izahay. Teo amin'ny solaitrabe, nanoritra tsipika sy tanàna roa ilay profesora: Mosko sy Vladivostok ary ireo kilometatra mandrakizay izay nampifandray azy roa. Nanontany ahy izy nanomboka teo manao ahoana i Vladivostok, inona no azo atao ao, inona no atolotry ny ...
2 Fizahan-tany Vladivostok
Araka ny nolazainay fa a Tanànan'ny seranan-tsambo rosiana ao amin'ny Oseana Pasifika, tena akaiky ny sisintany miaraka amin'i Korea Avaratra sy Sina. Nanomboka tamin'ny faran'ny taona 50 ka hatramin'ny fianjeran'ny fitondrana sovietika dia nakatona tamin'ny vazaha rehetra ny tanàna satria teto no nisy ny foiben'ny Fleet Pasifika Sovietika.
Amin'ny lafiny jeografia any Vladivostok dia misy tanibe sy tapany nosy izany dia ao amin'ny Hoalan'i Peter Lehibe. Ny ampahany amin'ny tanàna dia eo amin'ny saikinosy Peschany ary misy resaka momba ny 56 hektara amin'ny tanibe sy nosy 7.500 XNUMX eo ho eo.
Tsy teo am-pelatanan'ny Rosiana foana izy io, fa nahay nanao tanana sinoa nandritra ny fotoana kelikely ary teo am-pelatanan'ny olona hafa teo an-toerana. Russia dia nahazo ireo faritany ireo tamin'ny 1858 ary herintaona taty aoriana dia natsangana ny tafika an-dranomasina. Nanomboka tamin'izay dia nanomboka nitombo sy nitombo ny tanàna hatramin'ny 1891 ny fananganana ny Trans-Siberia Nanomboka izy io ary avy eo dia nanomboka nifandray tamin'izao tontolo izao ireo toerana lavitra any Russia toa an'ity tanàna ity.
Natao hampifandray an'ity seranana manan-danja ity amin'ny sisin-tanin'i Eropa ny lamasinina, mampifandray ny renivohitra rosiana sy ny tanàna hafa eny an-dalana. Natsangana tamin'ny 1912 ilay toby kanto ary soa ihany fa hatramin'ny 1991 ny vahiny no afaka mitsidika azy. Ny National Gregraphic no nilaza izany dia iray amin'ireo tanàna amoron-dranomasina 10 manandanja indrindra satria manana tetezana mampiavaka azy io, hatsaran-tarehy tsy mampino, nosy misy torapasika mahafinaritra ...
Amin'izay dia tsy maintsy ampidirintsika ny fiainam-piainana ananany, ny fifangaroan'ny gastrie sakafo Rosiana, Aziatika ary eoropeana, ny tranombakoka ...
Ny tantara dia miara-miasa amin'ity tanàna ity, koa raha tianao manokana ny tantaran'ny taonjato faha-XNUMX dia afaka mitsidika ny Tranombakoky ny tafika sy ny tantara miaramila amin'ny Pacific Fleet. Mifantoka amin'ny Ady Lehibe Faharoa izy io ary tena mahaliana. Tranombakoka iray hafa ny Tranombakoky ny S-56 Submarine, tsangambaton'ny Rosiana lavo tamin'ny ady rehetra.
Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny Tranombakoka Sukhanovs House izay taratry ny toetran'ny tanàna taloha, miaraka amin'ny fanaka, ny haingon-trano, varavarankely iray taloha. Ary mazava ho azy fa misy tranombakoka kanto roa. Zavatra iray hafa mahaliana dia ny Aquarium Primorsky, ao amin'ny Nosy Russky. Ny tranobe dia manana endrika onja mahaliana ary nosokafana tamin'ny 2016 niaraka tamin'ny maodely Mir-1 sy fosilin'ny foza velona 450 tapitrisa taona lasa izay.
Fitsangatsanganana izay tsy azon'ny olona atao rehetra dia ny fiakarana mankany Havoan'ny akorany, avy amin'ny toerana anananao Fijery mahatalanjona amin'ireo bay sy ny tanàna. Miakatra amin'ny funicular ianao, ilay tokana any amin'ny Farany Atsinanan'i Russia, eo amin'ny tehezan'i Sopka Orlínaya. Niorina tamin'ny 1959 teo ambany fanjakan'i Nikita Khrushchev, ny kalesiny roa ihany no naorina tao Leningrad ary nanomboka niasa izy tamin'ny 1962. Ny funicular dia mitondra anao any amin'ny havoana, volkano efa lany tamingana izay ao anatin'ny rojom-by Sikhote Alin. Ny fomba fijery no tsara indrindra.
Raha vantany vao nahita ny tanàna tamin'ny haavo tsara ianao, dia azonao atao ny mizaha azy an-tongotra. Ny fomba tsara indrindra dia ny fizahana ny lalambeny manomboka amin'ny Làlana Svetlanska, ny arabe voalohany amin'ny tanàna. Ny tranony kanto dia ampahany amin'ny tantaran'ny tanàna, fahatsiarovana ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, navadika ho hotely sy trano fandraisam-bahiny. Misy koa ny Tetezana volamena sy Helodrano Golden Horn, samy manintona be mpitia.
Ny tetezana dia iray amin'ireo tetezana tariby dimy lava indrindra eran'izao tontolo izao. Vita tamin'ny 2012 ary namakivaky ny Golden Horn Bay, eo afovoan'i Vladivostok, mampifandray ny tanàna amin'ireo faritra lavitra indrindra sy ny lalambe federaly. Ny tetezana volamena dia manomboka eo amin'ny moron'ny bay bay.Tsy io irery no tetezana, raha totaly dia misy telo: ny faharoa dia niampita ny East Bosphorus nankany amin'ny Nosy Russky ary ny fahatelo kosa dia namaky ny Helodrano Amur.
Ny tetezana rehetra ao Vladivostok dia natsangana tao anatin'ny telo taona, Amin'ny alàlan'ny matevina sy manify, satria be dia be no mbola tsy namboarina tao anatin'ny fotoana fohy. Ary tsy nisy koa tetezana naorina teo ambonin'ny lemaka amoron-dranomasina tany Russia, na tetezana tohanan'ny tariby handrakotra izany halavirana izany. Noho izany, notadiavina ny toro-hevitra avy amin'ny sinoa za-draharaha, frantsay ary japoney efa za-draharaha. Ary farany, natao tao Saint Petersburg ireo tetezana ary nahita ny mazava izy ireo.
Androany ireo tetezana telo ireo dia fahombiazan'ny injeniera ary izay rehetra mandeha any Vladivostok dia miampita azy ireo. Mahagaga ny traikefa niampitana ny Tetezana Russky tamin'ny ririnina, miaraka amin'ny rivotra mahery ... raha tsy miaraka amin'ny fiara sy ny rehetra ianao! Raha tsy misy fiara dia afaka miampita ny Tetezana Zolotoy an-tongotra ianao, amin'ny andro milamina.
Etsy ankilany dia ny Jiro jiro Tokarevskaya Koshka, toeran'ireo fitsangatsanganana maro. 150 taona izao izay manamarika ny fidiran'ny sambo amin'ny seranana. Misy hatrany ireo mpizahatany maka sary. Tsy maintsy mitsidika ny Rovan'i Vladivostok, fitambaran-trano mimanda androany nivadika tranombakoka. Na ny fiangonana kristianina natsangan'ny Protestanta, katolika ary rosiana orthodoksa rehefa nandeha ny fotoana.
Tsy ireo antokom-pinoana ireo ihany no ao an-tanàna misy fisian-tantara, misy ny Okrainiana, Moldavia, Poloney, Failandy ... fa ny fananganana tempoly kosa dia mitaky vola foana ary ireo vondrona lehibe telo ireo no nanana tombony. SASANY Fiangonana Vladivostok potika izy ireo ary ny sasany nahavita tafavoaka tamin'ny vanim-potoana sosialista, indraindray tsy miasa intsony toy ny tempoly. Misy ny fitambarany Fiangonana orthodoksa 40, fa ny lehibe indrindra sy lehibe indrindra dia ny Church of the intersection of the Mother of God, izay namboarina tamin'ny laoniny taorian'ny fianjeran'ny Firaisana Sovietika.
Ny lakolosiny dia misy lakolosy 10 ary milanja 1300 kilao ny mavesatra indrindra. Ity tempoly ity dia mahazaka olona an'arivony ary manandrana mitovy amin'ny kinovany tany am-boalohany, ilay misy domes dimy, araka izay azo atao. Miaraka amin'ny lakroa dia 40 metatra ny haavony. Fiangonana iray hafa tokony ho fantatra dia ny Fiangonana katolika an'ny renin'andriamanitra masina indrindra, an'ny fiarahamonina poloney sy ny Fiangonan'i Lotera St. Paul.
Na inona na inona zava-misy fa afaka mitsangatsangana an-tongotra ny tanàna ianao dia afaka mampiasa ny anao koa tambajotra fitaterana inona no tafiditra trolleybus, tram-by ary bus. Tsy misy gara fotsiny ny metro. Ary raha te hahafantatra ireo nosy manodidina ianao dia misy sambo sy sambo. Noho izany dia afaka mandeha any amin'ny Nosy Russky ianao, any amin'ny Nosy Rosiana, mirefy arivo metatra toradroa, mety amin'ny fitsangatsanganana sy fitsangatsanganana.
Afaka mankany Vladivostok avy any Japon ianao na afaka miverina any Vladivostok avy any Moskoa. Raha mandeha sambo ianao ary mijanona latsaky ny 72 ora dia tsy mila visa ianao. Raha manapa-kevitra amin'ny fiaran-dalamby ianao dia afaka raiso ny Trans-Siberian any Moskoa amin'ny 13:20 ary tonga ao Vladivostok amin'ny 4:25 amin'ny serivisy haingana. Ny kinova mora indrindra dia efa ho tamin'ny 19:XNUMX hariva ny ampitson'io izay nandao ny renivohitra rosiana. Mijanona ao Ilan Ude, Irkutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Omsk, Yekaterinburg ary Nizhny Novgorod ny fiaran-dalamby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Rosia » Dia Vladivostok